By vijayafm on	 November 21, 2018 सम्पादकीय
स्थानीय सरकारहरुका लागिे सुशासन र पारदर्शीताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई महत्वपूर्ण पक्रिया हो । यसले स्थानीय तह सञ्चालनलाई गाउँ वा नगरवासीबीच विश्वसनिय बनाउन मद्धत पुग्दछ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु, आयोजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षण, परिक्षणकार्यलाई पारदर्शी बनाउन पनि सार्वजनिक सुनुवाईका अभ्यास आवश्यक छ । स्थानीय तहमा धेरै किसिमका अधिकार प्रत्याभूत भइसकेको अवस्थामा झन् सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । नवलपुरका स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रमहरु कमै हुन थालेका छन् । कर्मचारीतन्त्र रहेको अवस्थामा चौमासिक रुपमा हुने गरेको सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रमहरु जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्थामा हुन सकेको देखिदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गैँडाकोट नगरपालिकामा चौमासिक रुपमा कुनै पनि किसीमको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । यो आर्थिक वर्षको पनि चौमासिक सकिएको छ । यस समय सम्म पनि कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
सिंह दरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि जनप्रतिनिधिले कामकार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शी बनाउनु अझ बढी आवश्यक छ । सार्वजनिक सुनुवाईले जनप्रतिनिधिलाई जनता र कामप्रति जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरिरहन्छ । यसतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ । गैँडाकोट कुनै पनि वाडमा अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गरी जनतासमक्ष यो यो काम सम्पन्न गर्यौँ । यति काम बाँकी छ भन्नेर भन्न सकेको अवस्था देखिदैन । यसले विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरुको पारदर्शीता र कामको चुस्ततामा सहयोग पुग्ने भएकाले पनि यस तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाकै हकमा उज्याले नगर कार्यक्रम, कालिगण्डकीको पानी गैँडाकोटको लगानी, एक घर एक स्वच्छ खानेपानी, निशुल्क भटनरी सेवा, धार्मिक पर्यटकीय वडा, बालमैत्री वडा, एक घर दुई विरुवा, दुई गमला अभियान जस्ता नगरका कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण के छ ? यस विषयमा जान्न पाउनु नगरबासीको अधिकार हो भने नगरकार्यपालिकाको कर्तव्य पनि हो ।
सार्वजनिक सुनुवाईले सञ्चालित कार्यक्रम समयमा सञ्चालन भएकी भएनन् ? यसमा कहाँकहाँबाट के कति लगानी भएको छ ? के मा के कति खर्च भएको छ ? खर्च पक्रिया ठीक छ की छैन ? खर्च विवरण ठीक छ की छैन ? कामको गुणस्तर कस्तो छ ? के कस्ता सुधार उपयोगी हुन सक्छ ? यस्ता विषयमा सरोकारवाला, नगरबासीसंग गरिने छलफल, सूचना, अन्तक्रिया र विश्लेषणले स्थानीय तहका विकासका कार्यक्रमलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यस्तो कार्यमा स्थानीय सरकारहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।